अकिरा सोनले शुक्रवार टोकियो ओलम्पिकमा ७८ किलोग्राम भन्दा बढी डिभिजन फाइनलमा क्युबाको इडालीस ओर्टिजलाई पराजित गर्दै महिला जुडोमा सबैभन्दा भारी तौल वर्गमा ओलम्पिकको उपाधि जित्ने २००४ पछि पहिलो जापानी जु...
आईजेएफ युथ तालिम शिविरमा सहभागी हुन २ खेलाडीसहित ३ सदस्यीय नेपाली जुडो टोली शनिबार स्विट्जरल्यान्डको लेसिन प्रस्थान गर्दैछ । तालिममा सहभागी हुने खेलाडीमा आयुशसिंह साउद र सम्झना थापा रहेका छन् । प्रशिक...
जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा नेपालकी एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएकि छिन् । केहीबेर अघि भएको खेलमा चौधरीले महिला १०० मिटर दौडमा खासै उल्लेख्य...
जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा अमेरिका ३५ पदकसहित शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ । चीन र जापानलाई उछिन्दै अमेरिका शीर्ष स्थान ओगट्न सफल भएको हो ।
टोकियो ओलम्पिकमा आज ८ खेलमा १७ स्वर्ण पदकको भिडन्त
एजेन्सी । टोकियो ओलम्पिकमा आज १७ स्वर्ण पदकका लागि खेलहरु हुनेछन् । आज जिम्न्याष्टिक, क्यानो स्लालोम, फेन्सीङ, जुडो, रोवीङ, शुटिङ, पौडी र टेबल टेनिसमा स्वर्ण पदिकको लागि भिडन्त हुनेछ ।
काठमाडौँ । जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकूदमा आयोजक जापान पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।
फ्लोरा डफीले जितिन् बर्मुडाको लागि पहिलो ओलम्पिक स्वर्ण
काठमाडौंँ। बर्मुडाकी फ्लोरा डफीले ओलम्पिकमा आफ्नो देशको लागि पहिलो स्वर्ण जितेकी छन् । जापानमा भइरहेको टोकियो ओलम्पिकमा डफीले मंगलबार ट्रायथलनमा ऐतिहासिक स्वर्ण जितेकी हुन् ।
टोकियो ओलम्पिक : पौडी खेलाडी एलेक्सले आज प्रतिस्पर्धा गर्दै
काठमाडौं । जापानमा भइरहेको टोकियो ओलम्पिक २०२० अन्तर्गत पौडीतर्फ नेपाली खेलाडी एलेकजान्डर (एलेक्स) शाहले आज प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
टोकियो ओलम्पिक : जापानी टेनिस खेलाडी ओसाका तेस्रो चरणबाटै बाहिरिइन्
काठमाडौँ । जापानी टेनिस खेलाडी नाओसी ओसाका टोकियो ओलम्पिक २०२० मा तेस्रो चरणबाटै बाहिरिएकी छिन् ।
भोलिदेखि जापानको टोकियोमा आयोजना हुने ३२ औँ गृष्मकालीन ओलम्पिकअन्तर्गत जुडो खेलमा नेपालकी खेलाडी सोनिया भट्टले रसियाकी खेलाडी डोल्गोभा इरिनासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्का भएको छ ।
जापानमा आयोजना हुने ३२औँ गृष्मकालीन ओलम्पिक खेलमा नेपालबाट चार खेलका पाँच खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्र्दैछन् ।
काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारीले गर्दा एक वर्षपछि सरेको ३२औं संस्करणको गृष्मकालीन ओलम्पिकको खेलहरु आजदेखि शुरु भएको छ ।
टोकियो ओलम्पिक : नेपाली खेलाडीको प्रतिस्पर्धा कुन-कुन दिन छ ?
काठमाडौं । ३२औं संस्करणको गृष्मकालीन ओलम्पिक आगामी शुक्रबारदेखि जापानमा शुरु हुँदैछ । टोकियो २०२० नाम दिइएको यस ओलम्पिकका लागि विश्वभरका खेलाडीहरु जापानमा भेला हुने क्रम जारी छ ।
ओलम्पिक फुटबलमा किन यू-२३ टिम खेलाइन्छ ?
काठमाडौं । जापानमा टोकियो ओलम्पिक शुरु हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । यही जुलाई २३ मा उद्घाटन हुने ३२औं संस्करणको गृष्मकालीन ओलम्पिकको फुटबल खेल भने त्यसको दुई दिन अघि नै शुरु हुनेछ ।
ओलम्पिकमा कुन कुन मुलुकले स्वर्ण पदक पाए ?
मेसीले चाहेनन् नेइमारको जर्सी खोस्न, ३० नम्बर दिने पिएस...
युरोकपबाट फ्रान्स बाहिरियो, स्विट्जरल्यान्डको ऐतिहासिक...
युरोकपको पहिलो सेमिफाइनलमा इटली र स्पेन भिड्दै
युरोकपका उत्कृष्ट खेलाडी डोनारुम्मा पीएसजीमा